Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ UK na -agbasa » Oké ifufe Anti-Vax Rioters Storm BBC London Studios
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • Akụkọ Ọchịchị • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
Ndị na-eme ngagharị iwe Anti-Vax na-eme ihe ike BBC Studio Studio nke London
Ndị ngagharị iwe kwenyere na ndị isi obodo ahụ na ụlọ ọrụ ọgwụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na -emekọ ihe iji ghọgbuo ọha Britain banyere ọrịa na ọgwụ mgbochi.
Ndị ngagharị iwe wakporo BBC Studios na London.
Ndị ngagharị iwe Anti-COVID Pass na ndị uwe ojii London na-ese okwu.
Ndị London na -eme ngagharị iwe iwebata akwụkwọ ikike ngafe ọgwụ mgbochi yana ịgba ọgwụ mgbochi ụmụaka.
Otu ndị na-eme ihe ike nke ndị na-eme ngagharị iwe COVID na-emegide wakporo wee nwaa ịbanye BBC studio na Television Center dị na West London.
Ìgwè mmadụ ọgba aghara nke ndị London na-emegide atụmatụ gọọmentị COVID-19 na ndị uwe ojii lụsoro ọgụ, ka ha na-achọ ịwaba ụlọ ahụ.
Esemokwu dị egwu n'ọnụ ụzọ ụlọ ihe nkiri BBC bụ ndị akaebe nọ ebe ahụ sere vidiyo. Ihe onyonyo a gosiri mmadụ iri na abụọ ma ọ bụ karịa ndị uwe ojii Metropolitan na -agba ọsọ ịkwụsị ndị ngagharị iwe a, ndị pụtara na ha bu n'obi ịmanye ka ha bata.
Iwe were dị ka ndị otu na -eme ngagharị iwe guzoro na agbụ mmadụ n'ihu ndị uwe ojii, na -agwa ndị ngagharị iwe ka ha kwụ n'ahịrị. Ìgwè mmadụ ahụ, nke mụbara n'ọnụ ọgụgụ ngwa ngwa, malitere iti mkpu, "Ihere mee gị!", Mana ha ezere ịnwa ịbanye ọzọ. Ụmụaka ole na ole guzoro n'azụ igwe mmadụ sonyeere n'ịkụ abụ.
The Ndị uweojii na-ahụ maka obodo kwuru na ọ “maara otu ndị ngagharị iwe” na mpụga ụlọ ihe nkiri BBC dị na Wood Lane, White City.
Onye na -ekwuchitere ndị uwe ojii kwuru, "Enweghị onye ejidere, mana ndị ọrụ na -abịa ma ga -aga n'ihu na -enyocha ọnọdụ ahụ."
BBC kwuru na ọ gaghị ekwu maka okwu gbasara nchekwa. Ihe nkiri Livestream si ebe ahụ gosiri ndị nọ n'ime ụlọ ahụ ka ha na -edowe tebụl n'akụkụ ụfọdụ ọnụ ụzọ akpọchiri akpọchi, nke ndị ngagharị iwe ahụ mere dị ka iji gbochie ụzọ mbata.
Ndị na-eme ngagharị iwe enweghị ntụkwasị obi na gọọmentị na-ejikwa ọrịa Covid-19-kpọmkwem iwebata paspọtụ ọgwụ mgbochi yana ịgba ụmụaka ọgwụ. Ha kwenyere na ndị isi obodo ahụ na ụlọ ọrụ ọgwụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na -emekọ ihe iji duhie ọha Britain banyere ọrịa na ọgwụ mgbochi.
O doro anya na ahọpụtara BBC maka ịbụ onye mgbasa ozi na-akwado ego ọha-nke, n'echiche ndị ngagharị iwe, na-eme maka ọdịmma gọọmentị karịa ndị Britain.
October 20, 2021 na 13: 31
Pete mkpuchi ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 10, 2021 na 21:07
Ozi na -ezighi ezi na amaghị ihe juru ebe niile na ịntanetị mana ndị mmadụ ka na -ewere ihe ha gụrụ dị ka eziokwu. Ọnọdụ dị mwute nke anyị hụrụ onwe anyị n'oge a.